အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
comments: ဤစာတမ်းမှာတော့အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အကြားတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှလင့်ခ်၏သတိပေးကြပါတယ်။ တစ်ခုလုံးစာရွက်ကောင်းကောင်းတစ်ဖတ်ရကျိုးနပ် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) လည်းဖြစ်တယ် ဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်။ ဒါဟာပညာရေးအဘို့အစဉ်အလာရှင်းလင်းချက် 180 အောက်မှာအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အတွက်မကြာသေးမီခုန်ဘို့အကောင့်မလုံလောက်ဖြစ်ကြောင်းထွက်ညွှန်ပြ, 40 သက်ဆိုင်ရာစာတမ်းများထက်ပိုသုံးသပ်ပြီး။ အဆိုပါဆရာဝန်များက porn ကိုဖယ်ရှားဘာသာရပ်များရှိသည်သောလေ့လာမှုများအဘို့ကိုခေါ်ပါ။ ထိုအတောအတွင်းသူတို့လူနာများနှင့်ဆရာဝန်များက porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအကဲဖြတ်ရန်ကိုကူညီများအတွက်ရိုးရှင်းသောအဖြေရှာတဲ့ protocol ကိုအကြံပြုပါသည်။
ပြုမူနေ။ သိပ္ပံ။ 2016, 6(3), 17; Doi: 10.3390 / bs6030017
ဘရိုင်ယန် Y. ပန်းခြံ 1ဂယ်ရီ Wilson က 2ယောနသန် Berger 3မဿဲ Christman 3, Bryn Reina 4, ဖရန့်ဆရာတော် 5, Warren P. Klam4နှင့်အင်ဒရူး P. Doan 4,5,*
1လေယာဉ်ခွဲစိတ်ဆရာ, ရေယာဉ်စုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပံ့ပိုးမှုတပ်မှ 40,-Norfolk, VA သို့ 34800 ဘော့ Wilson က Drive ကို, San Diego မှ,, CA 92592, အမေရိကန်နိုင်ငံ
2 အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်း5နှင်းဆီလမ်း, Edinburgh EH2 2PR, စကော့တလန်, ဗြိတိန်
3Urology ဌာန, ရေတပ် Medical Center မှာ San Diego မှ, 34800 ဘော့ Wilson က Drive ကို, San Diego မှ,, CA 92592, အမေရိကန်နိုင်ငံ
4စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, ရေတပ် Medical Center မှာ San Diego မှ, 34800 ဘော့ Wilson က Drive ကို, San Diego မှ,, CA 92592, အမေရိကန်နိုင်ငံစီးဌာန
5မျက်လုံးပညာရပ်ဆိုင်ရာဌာန, ရေတပ် Medical Center မှာ San Diego မှ, 34800 ဘော့ Wilson က Drive ကို, San Diego မှ,, CA 92592, အမေရိကန်နိုင်ငံ
* ပေးစာယူ: လျ .: + 1-619-532-6777
ပညာရေးဆိုင်ရာအယ်ဒီတာ: ဖြစ်သူ Scott ဃလိန်း
Received: 10 မေလ 2016 / လက်ခံထား:2သြဂုတ်လ 2016 / Published:5သြဂုတ်လ 2016
keywords: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု; အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု; နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်; ညစ်ညမ်း; အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း; PIED
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း, အကဲဖြတ်တူရိယာအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု. သုတေသနငယ်ရွယ်လူတို့တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအတွက်မကြုံစဖူးတိုး၏နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားများထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ 2012 မှာတော့ဆွစ်ဇာလန်သုတေသီများ [Erectile ရာထူးအမည်များ၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း (IIEF-30) ကို အသုံးပြု. 18-24 အသက်ဆွစ်ဇာလန်ယောက်ျား၏ cross-section မှာ 5% ၏ ED နှုန်းထားများတွေ့ရှိခဲ့8] ။ တစ်ဦးက 2013 အီတလီလေ့လာမှုအသစ်အစတင်ခြင်း ED များအတွက်အကူအညီရှာကြံလေးလူနာတဦးတည်း 40 [ကျော်အမျိုးသားများတွင်ထက်နီးပါး 10% ပိုမိုမြင့်မားပြင်းထန် ED ၏နှုန်းထားများနှင့်အတူ, 40 ထက်အသက်ငယ်ခဲ့ကြသည်အစီရင်ခံတင်ပြ9] ။ ကနေဒါဆယ်ကျော်သက်အပေါ်တစ်ဦးက 2014 လေ့လာမှု [53.5-16 အသက်ယောက်ျား၏ 21% ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာပြလက္ခဏာတွေရှိခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်10] ။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (26%), နဲ့အော်ဂဇင် (24%) နှင့်အတူပြဿနာများအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, အသုံးအများဆုံး (11%) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရလဒ် [ "သက်ကြီးစာပေအတွက်ဘုံဖြစ်သကဲ့သို့ဒါဟာကျနော်တို့ခြုံငုံထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားတဲ့နှုန်းကိုတွေ့အဘယ်ကြောင့်မရှင်းလင်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသင်တန်းသားများအကြားမြင့်မားတဲ့နှုန်းထက်အမျိုးသမီးပါဝင်သူတစ်ဦးတည်း" အံ့သြစရာအားဖြင့်စာရေးသူကိုယူ10] (p.638) ။ ဒီတူညီတဲ့အုပ်စုတစ်စုက 2016 လေ့လာမှုတစ်ဦးနှစ်နှစ်ကာလအတွင်းငါးလှိုင်းတံပိုးအတွက်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (16-21 နှစ်) အကဲဖြတ်။ အထီးအဘို့, (အနည်းဆုံးလှိုင်း၌) မြဲပြဿနာများကိုအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (47.9%), အနိမ့်အလိုဆန္ဒ (46.2%), နဲ့ erectile function ကိုအတွက်ပြဿနာများ (45.3%) ရှိကြ၏။ အဆိုပါသုတေသီများ [အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏နှုန်းထားများအမျိုးသမီးအဘို့ဖြစ်သည်မဟုတ်အထီးအဘို့ငြင်းဆန်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု11] ။ တက်ကြွတာဝန်စစ်မှုထမ်းအတွက် ED သစ် diagnoses တစ် 2014 လေ့လာမှု [နှုန်းထားများထက်ပိုမို 2004 နှင့် 2013 အကြားနှစ်ဆခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်12].
အမျိုးအစားမခွဲခြားထားသော ED ၏နှုန်းထားများအတော်လေးတည်ငြိမ်ကျန်ရစ်စဉ် psychogenic ED ၏နှုန်းထားများ [အော်ဂဲနစ် ED ထက်ပိုတိုးလာ12] ။ ငါးကို item IIEF-2014 အလုပ်သမားတစ်ဦးက 21 Cross-Section တက်ကြွတာဝန်၏လေ့လာမှုအတော်လေးကျန်းမာ, အထီးစစ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များအသက် 40-5 33.2% တစ်ခုခြုံငုံ ED နှုန်းကိုတွေ့ရှိခဲ့  posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါမရှိဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက် 15.7% သကဲ့သို့မြင့်မားသောနှုန်းနှင့်အတူ  ။ အဆိုပါသုတေသီများလည်း [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ရဲ့သားကောင်နှင့်ဆက်စပ်သောဘက်လိုက်မှု underreporting မှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု14] နှင့် ED နှင့်အတူသူတို့၏အမျိုးအသာ 1.64% ကိုစစ်တပ်မှတစ်ဆင့် phosphodiesterase-5 inhibitors ဘို့ဆေးညွှန်းရှာသောအခါခဲ့ကွောငျး  ။ စစ်တပ်က Cross-Section အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးကစက္ကန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတိုးမြှင့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများ [ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှု" နှင့် "အထီးလိင်အင်္ဂါ Self-image ကို" နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ထင်ရှား14] ။ တစ်ဦးက 2015 "အကျဉ်းဆက်သွယ်ရေး" 31% သကဲ့သို့မြင့်မားသောလိင်တက်ကြွယောက်ျားနှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှုန်းထားများအတွက် 37% သကဲ့သို့မြင့်မားသောပညာရေးနှုန်းထားများအစီရင်ခံ  ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ယောက်ျားအပေါ်အခြား 2015 လေ့လာမှု (အသက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 36 ဆိုလို), အဘယ်သူသည်မကြာခဏ "ကိုအသုံးပြုခြင်းညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ပူးပေါင်းလိင်အဘို့အနိမ့်အလိုဆန္ဒဖြင့်လိုက်ပါသွား ED ယခုသူတို့ရဲ့အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အကူအညီရှာကြံလူတို့တွင်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်တစ်ခုဘုံလေ့လာရေးကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် ".
ထိုအချိန်မှစ. သက်သေအထောက်အထားများကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏နှုန်းထားများအတွက်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်အတွက်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါတပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ နီးပါးခြောက်လသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့သူထင်ရှားတဲ့ "MedHelp.org ED ဖိုရမ်" အပေါ်အကူအညီနဲ့ရှာကြံ 10 3962 ၏ဧည့်သည်များထဲက 25 ထက်အသက်ငယ်ခဲ့ကြသည်။ ပို့စ်များနှင့်မှတ်ချက်များ၏ရှစ်နှစ်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများတွင်လေ့ ED (Non-အော်ဂဲနစ် ED) ၏စိတ်ကျန်းမာရေးရှုထောင့်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေစကားများအကြား, "porn" [ဝေးနေဖြင့်အများဆုံးမကြာခဏညျထငျရှား28] ။ အထက်တန်းကျကွီးရှယျအိုမြားအပေါ်တစ်ဦးက 2015 လေ့လာမှု [အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကြိမ်နှုန်းနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့29] ။ တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစားသုံးသူမြား၏, 16% (တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်းစားသုံးသူများအတွက်နှင့် 0%) Non-စားသုံးသူအတွက် 6% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကဖော်ပြခဲ့သည်။ ( "ပုံမှန်အားဖြင့်အလွန်မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူ") masturbated သူကို hypersexuality များအတွက်ကုသမှုတစ်ပတ်ကိုခုနစ်ခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနာရီရှာကြံယောက်ျား၏နောက်ထပ် 2015 လေ့လာမှု (ပျှမ်းမျှအသက် 41.5), [71% အခက်အခဲ orgasming သတင်းပို့အတူ 33% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ30] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထွက်ပေါက်အဖြစ်ညစ်ညမ်းအပေါ်ထပ်မံမှီခိုလှုံ့ဆျောနိုငျသညျ။ တစ်ဦး 2014 အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) လေ့လာမှုများတွင်အဘယ်သူ၏ဦးနှောက်စွဲ၏သက်သေအထောက်အထားများအဘို့အစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေခဲ့ 11 compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် (ပျမ်းမျှအသက် 19) ၏ 25, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်သူတို့ "ကြုံတွေ့ဖူးကြောင်းအစီရင်ခံ မိန်းမနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်အထူးလိင်စိတ်သို့မဟုတ် erectile function ကိုလျော့ (မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှဆက်ဆံရေးအတွက်ပေမယ့်) " ။ Clinician လည်း PIED အပါအဝင်ညစ်ညမ်း-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်, ဖော်ပြထားပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, သူ့စာအုပ် The New အဝတ်အချည်းစည်းရှိ urology ပါမောက္ခဟယ်ရီ Fisch [အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကသူ့လူနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုချို့ယွင်းနေသောသတင်းပေးပို့32] နှင့် Psychiatry ပါမောက္ခ-Norman Doidge အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဖယ်ရှားရေးသည်သူ၏လူနာများအတွက်ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်လိင်စိတ်နိုးထပြဿနာများပြောင်းပြန်သူ၏စာအုပ်ထဲတွင်ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါဦးနှောက်ကဖော်ပြခဲ့သည်  ။ 2014 ခုနှစ်, Bronner နှင့်ဘင်-ဇိအုန်တောင်ပေါ်ကသူ၏အရသာအစွန်းရောက်အမာခံညစ်ညမ်းမှဆိုးရွားလာခဲ့သည်ခဲ့သောတစ်ဦး compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူပူးပေါင်းလိင်ကာလအတွင်းအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများအတွက်အကူအညီရှာသောသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ [ရှစ်လညစ်ညမ်းအားလုံးကိုထိတွေ့မှုရပ်တန့်ပြီးနောက်လူနာအောင်မြင်သောအော်ဂဇင်နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ကြုံနေရအစီရင်ခံ, ကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးခံစားအတွက်အောင်မြင်ခဲ့34] ။ ယနေ့အထိမျှသည်အခြားသုတေသီများကသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများမှပံ့ပိုးဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နိုင်ရန်အတွက်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ variable ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အတူယောက်ျားဟုမေးကြသည်။
ထိုကဲ့သို့သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလေ့လာမှုများအရှိဆုံး illuminating ပါလိမ့်မယ်နေစဉ်, စာပေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် [arousal, ဆွဲငင်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းပြီလေ့လာမှုအတော်များများတွေ့27,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43] အခက်အခဲ orgasming, လျော့နည်းသွားလိင်စိတ်သို့မဟုတ် erectile function ကိုအပါအဝင် [27,30,31,35,43,44] ပူးပေါင်းလိင်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ , [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီး၏ခံစားလျော့နည်းသွား37,41,45] လျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု [38,39,40,43,44,45,46,47] တနာတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံကျော် arousal အောင်မြင်ရန်ထိန်းသိမ်းနည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးများအတွက်ဦးစားပေး  နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူလိင်များအတွက်လျော့နည်းဆန္ဒသတင်းပို့ရှိသူများအတွက်ညစ်ညမ်းတုံ့ပြန် သာ. ကြီးမြတ်ဦးနှောက်ကို Activation  ။ အထက်တန်းကျကွီးရှယျအိုမြားအတွက်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဆက်နွယ်နေကြောင်းနောက်တဖန်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအကြိမ်ရေ  ။ နှစျခု 2016 လေ့လာမှုများကဒီမှာအသေးစိတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရထိုက်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှု longitudinal ဒေတာတွေနဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်အိမ်ထောင်သည်ပေါ်ပထမဦးဆုံးတစ်နိုင်ငံလုံး-ကိုယ်စားလှယ်လေ့လာမှုဖြစ်ဖို့ပြောဆိုထားသည်။ ဒါဟာ Wave ကို 1 (2006) မှာမကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အဆိုး Wave ကို2(2012) မှာသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝနှင့်အတူသင်တန်းသားများကို '' အိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူ related ခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အများဆုံးအပျက်သဘောထိခိုက်အဆိုပါလက်ထပ်ထိမ်းမြားအမြင့်ဆုံးကြိမ်နှုန်း (တစ်ချိန်ကတစ်ရက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို) မှာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခဲ့ကြသောလူတို့၏ရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ မျိုးစုံ variable တွေကိုအကဲဖြတ်, 2006 အတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်း [2012 ဆင်းရဲသားအိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးကို၏ဒုတိယအပြင်းထန်ဆုံးခန့်မှန်းခဲ့သည်47] ။ ဒုတိယလေ့လာမှုကိုတိုက်ရိုက်အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့် OSAs (အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ) တွင်ပြဿနာပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တစ်ခုတည်းသောလေ့လာမှုဖြစ်ဖို့ပြောဆိုထားသည်။ 434 ယောက်ျား၏ဤစစ်တမ်းအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အောက်ပိုင်း erectile function ကိုပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းအစီရင်ခံ  ။ ထို့အပြင်လူတို့၏ 20.3% ဟာသူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်တဦးတည်းရည်ရွယ်ချက်က [ "ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ arousal ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့" ကပြောသည်44] ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတင်းမာမှုညွှန်ပြစေခြင်းငှါတစ်ဦးတွေ့ရှိချက်များတွင် 49% တစ်ခါတစ်ရံ "သူတို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာဖွေနေသို့မဟုတ်သူတို့ကိုယခင်ကစိတ်ဝင်စားဖို့မဟုတ်ကြကြောင်း OSAs တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရသို့မဟုတ်" ဖော်ပြထား  (p.260) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြဿနာအဖြစ် OSAs ၏သင်တန်းသားများကို (27.6%) Self-အကဲဖြတ်သူတို့ရဲ့စားသုံးမှုသိသိသာသာရာခိုင်နှုန်း။ ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ဤနှုန်းမှာမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်နေစဉ်, ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လအတွက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သူ 2016 ယောက်ျားအပေါ်အခြား 1298 လေ့လာမှု [သင်တန်းသားများ၏ 28% hypersexuality ရောဂါများအတွက် cutoff မှာသို့မဟုတ်အထက်သွင်းယူကြောင်းအစီရင်ခံ49].
ယနေ့အထိ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အလားအလာကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အဖြစ်ကောင်းစွာအရက်နှင့်ဆေးလိပ်အသုံးပြုရန်သူများ, နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မဟုတ်ကျယ်ပြန့် [သာမန်အပြုအမူများနှင့် ပို. ပို. လူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်နှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်ပုံဖော်နေသည်108,109] ။ လူတို့သညျမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အတူကြည့်ရှုသူတို့၏ညစ်ညမ်းချိတ်ဆက်ဖို့နှေးကွေးနေဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, "အဘယ်သူသည်ဤသည်နေ့ရက်ကာလ porn ကိုကြည့်ဘဲနေရသနည်း" ငါတို့စစ်မှုထမ်းတစ်ဦးသည်သူ၏ဆရာဝန်ကိုမေးမြန်းအဖြစ်။ သူ [ပုံမှန်အဖြစ်မြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်၏ဖြစ်ကောင်းပင်သက်သေအထောက်အထားများကသူ့ပြဿနာတိုးတက်မှုမှတ်110] ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့စွဲ-related ဖြစ်စဉ်များတစ်ခုအရိပ်အယောင်ခဲ့ကြောင်းကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထား [လည်းမရှိ31,52,54,73,86,107,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122] ။ ဖင်လန်သုတေသနပညာရှင်များက [compulsive ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်အသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ဖို့ "အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေး" ကိုတွေ့ရှိခဲ့123] နှင့်အင်တာနက် applications များတစ်ဦးတည်းနှစ် longitudinal လေ့လာမှုကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအဘို့အမြင့်ဆုံးအလားအလာရှိစေခြင်းငှါထင်ရှား  အင်တာနက်ကိုနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများအတွက်အနီးကပ်ဒုတိယကစားအတူ။ ယနေ့အထိ, အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (IGD) [အတွက် Diagnostic အတွက်နောက်ထပ်လေ့လာမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders (DSM-5) ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်ဘို့စီစဉ်ထားခဲ့ပြီး125], အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲရောဂါမဟုတ်ရှိပါတယ်နေစဉ်။ သို့သော်ဗြိတိန်သုတေသီ Griffiths က၏ရှုထောအတွက် "လိင်စွဲလမ်းများအတွက်ပင်ကိုယ်မူလအခြေစိုက်စခန်း IGD နဲ့တန်းတူအပေါ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်"  ။ တကယ်တော့, အမျိုးမျိုးသောစွဲကျွမ်းကျင်သူများက [ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းနှင့်ညစ်ညမ်းအဖြစ်ပိုပြီးတိကျတဲ့ Subtype အတူ generalized ပြဿနာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့အင်တာနက်စွဲတောင်းဆိုနေကြပါတယ်118,126,127,128] ။ တစ်ဦးက 2015 ပြန်လည်သုံးသပ်လည်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲအဆိုပါ DSM အတွက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အင်တာနက်စွဲ [တဲ့မျိုးကွဲအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသင့်ကြောင်းကောက်ချက်ချ118].
လူသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအေးစက်အပေါ်သုတေသနကန့်သတ်, ဒါပေမဲ့လိင်စိတ်နိုးထအေးစက်ကြောင်းပြသထားတယ် [179,180,181] နှင့်လူကြီးဖို့အထူးသဖြင့်ကြိုတင်  ။ လူတို့သညျတှငျ, arousal အထူးသဖြင့်ရုပ်ရှင်မှအေးစက်နိုင်ပါသည်  အဖြစ်ပုံရိပ်တွေဖို့  ။ အထီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆွဲဆောင်မှု (Non-လူ့) တိရစ္ဆာန်များ, အသီး / ခွံမာသီးရနံ့အပါအဝင်ပုံမှန်အားဖြင့်ထိုသူတို့အဘို့လိင်အဓိကမဟုတ်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုတခုခင်းကျင်းတို့အားဤသို့သော cadaverine, လိင်တူချင်းမိတ်ဖက်များနှင့်ဝတ်ထားအဖြစ်ဆန္ဒရှိရနံ့, အေးစက်နိုင်ပါသည် ကြွက်အကျီ၏ [177,185,186,187] ။ ဥပမာ, ဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်အတူလိင်သင်ယူခဲ့ကွောငျးကြွက် [သူတို့ရဲ့အကျီမပါဘဲပုံမှန်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဘူး187].
Laumann, EO; ပိုက်, တစ်ဦးက .; ရို, United States မှာ RC လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်း။ ဂျေအေအမ်အေ 1999, 281, 537-544 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Sarracino, C ကို .; Scott, အမေရိက KM အဆိုပါ porn: အဆိုပါ Porn ယဉ်ကျေးမှုထအဲဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ, ဘယ်မှာရှိကျနော်တို့ဒီနေရာမှာကနေ သွား. , Beacon စာနယ်ဇင်း: ဘော်စတွန် MA, အမေရိကန်, 2009 ။ [Google Scholar]
Nicolosi, တစ်ဦးက .; Laumann, EO; Glasser, DB; Moreira, ED; ပိုက်, တစ်ဦးက .; Gingell, လိင်သဘောထား C. ကို Global လေ့လာမှုနှင့်အသက်အရွယ် 40 ပြီးနောက်အပြုအမူစုံစမ်းစစ်ဆေး '' Group မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလေ့လာမှု။ Urology 2004, 64, 991-997 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Landripet ငါ .; Štulhofer, အေ Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Associated လား? ဂျေလိင်။ Med ။ 2015, 12, 1136-1139 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
de Boer, BJ; bot တွေဟာ, ML; Lycklama တစ် Nijeholt, AAB; မြေရိုင်းလွင်ပြင်, JPC; Pieters, HM; Verheij, မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုအတွက် TJM Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်စိတ်ရှည်ဝိသေသလက္ခဏာများ။ အဆိုပါ Enigma လေ့လာမှု။ int ။ ဂျေသင်ျခြို။ res ။ 2004, 16, 358-364 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Mialon, တစ်ဦးက .; Berchtold, တစ်ဦးက .; Michaud, P. -တစ်ဦးက .; Gmel, G .; Suris, J.-C. ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ: လူပျိုတို့အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်။ ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ ကနျြးမာရေးဟာ Off ။ Publ ။ Soc ။ မြီးကောင်ပေါက်။ Med ။ 2012, 51, 25-31 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Capogrosso, P ကို ​​.; Colicchia, M က .; Ventimiglia, E ကို .; Castagna, G .; Clementi, MC; Suardi, N ကို .; Castiglione, F ကို .; Briganti, တစ်ဦးက .; Cantiello, F ကို .; Damiano, R ကို .; et al ။ အသစ်စက်စက်ရောဂါ Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူလေးထဲကတစျခုမှာလူနာအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလက်တွေ့အလေ့အကျင့်ကနေလူငယ်က Man-စိုးရိမ်ဖွယ်ရုပ်ပုံ Is: အသစ်စက်စက်ရောဂါ ED နှင့်အတူလေးထဲကတစ်ခုမှာလူနာတစ်ဦးလူငယ်က Man Is ။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2013, 10, 1833-1841 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
O'Sullivan, LF; Brotto, LA က; Byers, ES; Majerovich ဂျေ; Wuest ဂျေအေပျံ့နှံ့နေတဲ့နှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်မှလိင်အတွေ့အကြုံရှိအလယ်တန်းအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများဝိသေသလက္ခဏာများ။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2014, 11, 630-641 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
O'Sullivan, LF; Byers, ES; Brotto, LA က; Majerovich ဂျေ; ဖလက်ချာ, လိင်စွမ်းရည်နှင့်နှောင်းပိုင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းမှအလယျပိုငျးအကြားဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအတွက်ပြဿနာများ၏ဂျေတစ်ဦးက longitudinal လေ့လာပါ။ ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ ကနျြးမာရေးဟာ Off ။ Publ ။ Soc ။ မြီးကောင်ပေါက်။ Med ။ 2016။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
တပ်မတော်နေ့ကနျြးမာရေး Surveillance Centre (AFHSC) ။ အထီးတက်ကြွစွာအစိတ်အပိုင်းဝန်ဆောင်မှုအင်္ဂါတို့တွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, အမေရိကန်တပ်မတော်နေ့, 2004-2013 ။ MSMR 2014, 21, 13-16 ။ [Google Scholar]
Wilcox, SL; Redmond, S ကို .; ဟာဆန်, စစ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် pm တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ: ပဏာမခန့်မှန်းချက်များနှင့်ခန့်မှန်း။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2014, 11, 2537-2545 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Wilcox, SL; Redmond, S ကို .; Davis က, TL အင်္ဂါပုံရိပ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ငယ်ရွယ်အထီးစစ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များအကြား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2015, 12, 1389-1397 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Klein, V ကို .; Jurin, T က .; Briken, P ကို ​​.; Štulhofer, အေ Erectile အလုပ်မဖြစ်, ပျင်းတာဟာနှင့် Hypersexuality နှစ်ဦးကိုဥရောပနိုင်ငံများကနေစုံတွဲအမျိုးသားများအကြား။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2015, 12, 2160-2167 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
မာတင်အပြည်ပြည်သွား; Abdo, CHN Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် 18-40 နှစ်ပေါင်းအသက်ဘရာဇီးအမျိုးသားများတွင်ဆက်စပ်အချက်များ။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2010, 7, 2166-2173 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Papagiannopoulos, D ကို .; Khare, N ကို .; Nehra, အော်ဂဲနစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလုလင်အေအကဲဖြတ်။ အာရှဂျေ Androl ။ 2015, 17, 11-16 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Flegal, KM; ကာရိုး, MD, အော့ဒန်ဝင်း, CL; Curtin, LR ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလူကြီးများအကြားတွင်အဝလွန်ခြင်းအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, 1999-2008 ။ ဂျေအေအမ်အေ 2010, 303, 235-241 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Angst, ဂျေ .; Gamma, တစ်ဦးက .; Sellaro, R ကို .; Zhang က, H ကို .; Merikangas, ရပ်ရွာထဲတွင် atypical စိတ်ကျရောဂါ၏အတညျပွုခါနီး K. : အဇူးရစ်ဆောင်များတွင်လေ့လာမှုရလဒ်များ။ ဂျေအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ disorders ။ 2002, 72, 125-138 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Mathew, RJ; Weinman, စိတ်ကျရောဂါအတွက် ML လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 1982, 11, 323-328 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Bancroft, ဂျေ .; Janssen, E ကို .; ခိုင်မာတဲ့, D ကို .; Carnes, L ကို .; Vukadinovic, Z ကို .; Long က, JS လိင်ကွဲယောက်ျားအတွက်ခံစားချက်နှင့်လိင်အကြားစပ်လျဉ်း။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2003, 32, 217-230 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Bancroft, ဂျေ .; Janssen, E ကို .; ခိုင်မာတဲ့, D ကို .; Vukadinovic, Z. လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေအတွက်ခံစားချက်နှင့်လိင်အကြားစပ်လျဉ်း။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2003, 32, 231-242 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Seidman, SN; Roose, SP စိတ်ကျရောဂါနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားဆက်ဆံရေးဟာ။ Curr ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုကိုယ်စားလှယ်။ 2000, 2, 201-205 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Janssen, E ။ ; Bancroft, J. Dual-Control Model: လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်အပြုအမူများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အခန်းကဏ္။ ။ လိင်၏စိတ်ပညာဇီဝကမ္မဗေဒ၌၎င်း, Janssen, အီး, Ed က။ ; Indiana တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း - Bloomington, IN, USA, 2007; စစ။ 197-222 ။ [Google Scholar]
Damiano, P ကို ​​.; Alessandro, B, .; Carlo, အက်ဖ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်ဝက်ဘ် porn: လိင်၏ခေတ်သစ်။ int ။ ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ Med ။ ကျန်းမာရေး 2015, 28, 169-173 ။ [Google Scholar]
Sutton, KS; Stratton, N ကို .; Pytyck, ဂျေ .; Kolla, NJ; 115 ဆက်တိုက်အမျိုးသားဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးကဘက်စုံဇယားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: Hypersexuality လွှဲပြောင်းအမျိုးအစားအားဖြင့် Cantor, JM လူနာလက်ခဏာ။ ဂျေလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2015, 41, 563-580 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Voon, V ကို .; မှဲ့, တီဘီ, BANCA, P ကို ​​.; ပေါ်တာ L ကို .; မောရစ်, L ကို .; မစ်ချယ်, S ကို .; Lapa, TR; Karr, ဂျေ .; Harrison, NA; Potenza, MN; et al ။ နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ PLoS ONE 2014, 9, e102419 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Fisch, HM သစ်အဝတ်အချည်းစည်း: လူကြီးတွေများအတွက် Ultimate လိင်ပညာပေး; Sourcebooks: Naperville, IL, အမေရိကန်, 2014 ။ [Google Scholar]
Doidge သူ့ဟာသူပြောင်းလဲဒါက N. အဆိုပါဦးနှောက်: ဦးနှောက်သိပ္ပံ၏ Frontiers ကနေကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှု၏ပုံပြင်, 1st ed .; ပင်ဂွင်းစာအုပ်များ: နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်, 2007 ။ [Google Scholar]
Bronner, G .; ဗင်္ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာလူပျိုတို့အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုတစ်ခု etiological အချက်အဖြစ် IZ ပုံမှန်မဟုတ်သော masturbatory အလေ့အကျင့်။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2014, 11, 1798-1806 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Carvalheira, တစ်ဦးက .; Træen, B, .; လျော့နည်းသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire ့တာရယ်လိင်ကွဲအမျိုးသားများများထဲတွင် Stulhofer, အေတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု: တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ဘယ်လိုအတော်များများအခန်းကဏ္ဍ? ဂျေလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2015, 41, 626-635 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Daneback K ကို .; Traeen, B, .; Månsson, S.-A. နော်ဝေလိင်ကွဲစုံတွဲတစ်ကျပန်းနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2009, 38, 746-753 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
နေရောင်, C ကို .; တံတားများ, တစ်ဦးက .; Johnason, ဂျေ .; Ezzell, အမ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အမျိုးသားလိင် Script: An စားသုံးမှုလေ့လာခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2014, 45, 1-12 ။ [Google Scholar]
မော်ဂန်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက် '' အသုံးပြုမှုနှင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဦးစားပေး, အပြုအမူနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအကြား EM အစည်းအရုံးများ။ ဂျေလိင် Res ။ 2011, 48, 520-530 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Maddox, Am, Rhoades, GK; တစ်ယောက်တည်းသို့မဟုတ်အတူတကွလိင်-အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများကြည့်ရှုခြင်း Markman, HJ: ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်အတူအသင်း။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2011, 40, 441-448 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
တံတားများ, AJ; Morokoff, လိင်ကွဲစုံတွဲအတွက် PJ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ကျေနပ်မှု။ Pers ။ Relatsh ။ 2011, 18, 562-585 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Stewart က, DN; Szymanski တစ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်၏ Correlate, ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အမျိုးသားရိုမန်းတစ်အဖော်ရဲ့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှု DM လူငယ်လူကြီးအမျိုးသမီးများနေ့အစီရင်ခံစာများ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ 2012, 67, 257-271 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
နေရောင်, C ကို .; Miezan, E ကို .; Lee က, N. -Y ကို .; ရှိန်းပြား, JW ကိုရီးယားအမျိုးသားများရဲ့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု, Extreme ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအတွက်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားနှင့် Dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး။ int ။ ဂျေလိင်။ ကျန်းမာရေး 2015, 27, 16-35 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Zillmann, D ကို .; Bryant, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပေါ်ဂျေညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံရဲ့သက်ရောက်မှု။ ဂျေ Apple က။ Soc ။ Psychol ။ 2006။ [Google Scholar] [CrossRef]
Wéry, တစ်ဦးက .; Billieux, ဂျေအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ: ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာအသုံးပြုမှုပုံစံများတစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး။ Hum ။ ပြုမူနေ။ 2016, 56, 257-266 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Poulsen, fo; မတ်ဘတ်စ်ဘီကိုင်တွယ်, DM; Galovan, Am ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု: ဘယ်သူကအသုံးပြုဘယ်လိုစုံတွဲရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဂျေလိင် Res ။ 2013, 50, 72-83 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Doran K ကို .; စျေး, ဂျေညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အိမ်ထောင်ရေး။ ဂျေ Fam ။ Econ ။ ကိစ္စများ 2014, 35, 489-498 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ပယ်ရီ, SL ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးကျော်အချိန်ကိုလျှော့ချကြည့်ရှုခြင်းပါသလား? longitudinal ဒေတာများအနေဖြင့်အထောက်အထား။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2016။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
သံမဏိ, VR; Staley, C ကို .; Fong သည်, T က .; Prause, N. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, မ hypersexuality, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်ရူးနှမ်း neurophysiological တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ Socioaffective neuroscience ။ Psychol ။ 2013။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kraus, SW; Martino, S ကို .; Potenza, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာအတွက်စိတ်ဝင်စားလူ MN လက်တွေ့လက်ခဏာ။ ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ 2016, 5, 169-178 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Prause, N ကို .; မဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်နိုင်မှု, မ Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူလိင်လှုံ့ဆော်မှု Associated ကိုကြည့်ရှုခြင်း Pfaus, ဂျေ။ လိင်။ Med ။ 2015, 3, 90-98 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
မဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်နိုင်မှုနှင့်အတူလိင်လှုံ့ဆော်မှု Associated, မ Erectile အလုပ်မဖြစ်ကိုကြည့်ရှုခြင်း Isenberg, RA: တစ်ဦးကမှတ်ချက်။ လိင်။ Med ။ 2015, 3, 219-221 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Laier, C ကို .; Pekal, ဂျေ .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အလုပ်မဖြစ်ဖြေရှင်းလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများအတွက်ဘာစွဲဆုံးဖြတ်ရန်။ Cyberpsychology ။ ပြုမူနေ။ Soc ။ Netw ။ 2015, 18, 575-580 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M က .; Laier, C ကို .; Pawlikowski, M က .; Schächtle, ဦး .; Schöler, T က .; Altstötter-Gleich အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအကဲခတ်, C. : အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုလိင်က်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု. များအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ ratings နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-စိတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေအခန်းက္ပ။ Cyberpsychology ။ ပြုမူနေ။ Soc ။ Netw ။ 2011, 14, 371-377 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Twohig, အမတ်, Crosby သည်, JM; ဘယ်လိုအဘယ်သူကိုကပြဿနာဖြစ်ပြီး, အဘယ်ကြောင့်: ကော့, JM ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုခြင်း, လိင်။ စှဲလမျးသူ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော 2009, 16, 253-266 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Demetrovics, Z ကို .; Király, Baggio et al အပေါ် O. Commentary ။ (2016): internet / ဂိမ်းစွဲအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလေးလံသောအသုံးပြုမှုထက်ပိုပါတယ်။ စှဲမွဲမှု 2016, 111, 523-524 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Štulhofer, တစ်ဦးက .; Bajić, z ။ Erectile နှင့်ခရိုအေးရှားအတွက်အမျိုးသားများအကြား Ejaculatory အခက်အခဲများ၏ပျံ့နှံ့။ Croat ။ Med ။ ဂျေ 2006, 47, 114-124 ။ [Google Scholar] [PubMed]
Hald ပေါ်တွင် GM ကမှတ်ချက်: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Associated Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူရှိပါသလား? ဂျေလိင်။ Med ။ 2015, 12, 1140-1141 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Carvalheira, တစ်ဦးက .; Traeen, B, .; ယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားŠtulhofer, အေဆက်စပ်မှု: တစ်ဦးက Cross-ယဉ်ကျေးမှုလေ့လာမှု။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2014, 11, 154-164 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Pfaus, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ JG Pathways ။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2009, 6, 1506-1533 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Melis, MR; Argiolas, penile စိုက်ထူ၏အေဗဟိုထိန်းချုပ်မှု: oxytocin နှင့်အထီးကြွက်များတွင် dopamine နဲ့အချိုမှုအက်ဆစ်နှင့်အတူ၎င်း၏အပြန်အလှန်၏အခန်းကဏ္ဍကို၏တစ်ဦးကပြန်လည်စစ်ကြော။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2011, 35, 939-955 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Alcaro, တစ်ဦးက .; Huber, R ကို .; အဆိုပါ Mesolimbic Dopaminergic စနစ်၏ Panksepp, ဂျေအပြုအမူ Functions များ: တစ်ဦးထိခိုက်စေ Neuroethological အမြင်။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 2007, 56, 283-321 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Volkow, ND; ဝမ်, G. အ-J ကို .; မုဆိုး, JS; Tomasi, D ကို .; Telang, အက်ဖ်စွဲ: dopamine ဆုလာဘ် circuitry အပြင်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 2011, 108, 15037-15042 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Pfaus, JG Dopamine: ကူညီပေးခြင်းအထီးကအနည်းဆုံး 200 သန်းနှစ်ပေါင်း copulate: Kleitz-နယ်လ်ဆင် et al အပေါ်သီအိုရီမှတ်ချက်။ (2010) ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 2010, 124, 877-880 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Egecioglu, E ကို .; Prieto-Garcia က, L ကို .; Studer, E ကို .; Westberg, L ကို .; Jerlhag, အီးအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အချက်ပြ ghrelin ၏အခန်းကဏ္ဍ။ စှဲလမျးသူ။ Biol ။ 2014, 21, 348-359 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Arnow, BA ဘွဲ့; Desmond, je; နဖူးစည်းစာတမ်း, ll; ဂလိုဗာ, GH; ရှောလမုန်သည်, တစ်ဦးက .; Polan, ML; Lue, TF; Atlas, ကျန်းမာ, လိင်ကွဲအထီးအတွက်အနောက်တောင်ဘက်တွင်ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်လိင်စိတ်နိုးထ။ ဦးနှောက် 2002, 125, 1014-1023 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ Stief, CG ဗဟိုယန္တရားများ: တစ်ဆရာသိရန်လိုပေမည်ကဘာလဲ။ int ။ ဂျေသင်ျခြို။ res ။ 2003, 15, S3-S6 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Andersson, K.-E. erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ pharmacological ကုသမှုများအတွက် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်အခြေခံ၏ mechanisms ။ Pharmacol ။ ဗျာ 2011, 63, 811-859 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Volkow, ND; ဝမ်, G. အ-J ကို .; မုဆိုး, JS; Tomasi, D ကို .; Telang, F ကို .; Baler, R. စွဲ: sensitivity ကိုတိုးပှားမျှော်လင့် sensitivity ကိုဦးနှောက်ရဲ့ control circuit ကိုလွှမ်းမိုးဖို့ပရိယာယ်ပြုမည်ဆုချယုတ်လျော့လေ၏။ BioEssays သတင်းဗျာ Mol ။ cell ။ dev ။ Biol ။ 2010, 32, 748-755 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Frascella, ဂျေ .; Potenza, MN; ဘရောင်း, ll; သစ်တစ်ခုပူးတွဲမှာစွဲထွင်းထု Childress, AR? shared ဦးနှောက်အားနည်းချက်များ Non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းများအတွက်လမ်းဖွင့်လှစ်။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 2010, 1187, 294-315 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Leyton, M က .; Vezina, စှဲဖို့အားနည်းချက်အတွက် P. Dopamine အတက်အကျ: တစ်ဦးက neurodevelopmental မော်ဒယ်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol ။ သိပ္ပံ။ 2014, 35, 268-276 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Griffiths ကတစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲအဖြစ် MD compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အဆိုပါအင်တာနက်သက်ရောက်မှုများနှင့်အခြားကိစ္စရပ်များကို။ စှဲမွဲမှု 2016။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ဟီလ်တန်, neuroplasticity များ၏အခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစား DL ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ-တစ်ဦးက supranormal နှိုးဆွ။ Socioaffective neuroscience ။ Psychol ။ 2013, 3, 20767 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Negash, S ကို .; Sheppard, NVN; လမ်းဘတ်, မိုင်, လက်ရှိပျော်ရွှင်မှုများအတွက် Fincham, FD ထရေးဒင်းနောက်ပိုင်းတွင်ဆုလာဘ်များ: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်နှောင့်နှေးလျှော့စျေး။ ဂျေလိင် Res ။ 2015, 1-12 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ယူလနျြ, E ကို .; ခေါ်ဆောင်သွားဆွငါးခုသည် Modes ဖြတ်ပြီး R. အမျိုးသားလိင်စိတ်နိုးထ, ကျော်။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 1988, 17, 131-143 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Laan, E ကို .; Everaerd, ဆလိုက်များနှင့်ရုပ်ရှင်မှအမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ဒဗလျူလေ့။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 1995, 24, 517-541 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Koukounas, E ကို .; ကျော်, R. အမျိုးသားလိင်စိတ်နိုးထရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့်အကြောင်းအရာအတွက်ကိုက်ညီ Fantasy အားဖြင့်ရူးနှမ်း။ Aust ။ ဂျေ Psychol ။ 1997, 49, 1-5 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Goldey, KL; ဗန် Anders, လှုံ့ဆော်မှုအလယ်အလတ်အမျိုးသမီးများနေ့ကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်ရှေးခယျြ Erotica မှ testosterone တုံ့ပြန်ချက်နှင့်အတူ SM သတ်မှတ်ခြင်း။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2015, 77, 1-17 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kim က, SC; ဘန်, JH; ဟွန်, JS; seo, ထပ်ခါတစ်လဲလဲအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်လိင်စိတ်ကြွဆေးမှ Erectile တုံ့ပြန်မှုအတွက် KK အပြောင်းအလဲများ။ အီးယူအာရ်။ Urol ။ 1998, 33, 290-292 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ယောသပ်သည် PN; Sharma က, RK; Agarwal, တစ်ဦးက .; ပိုလျင်မြန်စွာ Sirot, LK အမျိုးသားများသုက် Semen ၏ပိုကြီးသော Volumes ကိုပိုမို Motilal သုက်ပိုးနှင့် Novell အမျိုးသမီးပုံများနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါ။ Evol ။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ 2015, 1, 195-200 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Koukounas, E ကို .; အထီးလိင်စိတ်နိုးထ၏လေ့နှင့် dishabituation စဉ်အတွင်းအာရုံကိုအရင်းအမြစ်များ R. ခွဲဝေ, ကျော်။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 1999, 28, 539-552 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Meuwissen ငါ .; ကျော်, R. လေ့နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်စိတ်နိုးထ၏ dishabituation ။ ပြုမူနေ။ res ။ Ther ။ 1990, 28, 217-226 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Koukounas, E ကို .; လိင်စိတ်နိုးထ၏လေ့စဉ်အတွင်း eyeblink ထိတ်လန့်တုန့်ပြန်၏ပြင်းအားအတွက်ကျော်, R. အပြောင်းအလဲများ။ ပြုမူနေ။ res ။ Ther ။ 2000, 38, 573-584 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Schomaker, ဂျေ .; Meeter, အမ်ရေတိုနှင့်ဦးနှောက်နှင့်သိမှတ်ခံစားမှုပေါ်အသစ်အဆန်း, deviance နှင့်အံ့အားသင့်စရာများကြာရှည်ခံအကျိုးဆက်များ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2015, 55, 268-279 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
BANCA, P ကို ​​.; မောရစ်, LS, မစ်ချယ်, S ကို .; Harrison, NA; Potenza, MN; Voon, V. ပစ္စည်းအသစ်အဆန်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှအေးစက်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု။ ဂျေ Psychiatric ။ res ။ 2016, 72, 91-101 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Fadok, JP; Dickerson, TMK; Palmiter, RD Dopamine cue-မှီခိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်ဘို့လိုအပ်ပေသည်။ ဂျေ neuroscience ။ off ။ ဂျေ Soc ။ neuroscience ။ 2009, 29, 11089-11097 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Barlow, DH; Sakheim, DK; Beck, JG တော့ပူပန်လိင်စိတ်နိုးထတိုးပွားစေပါသည်။ ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ 1983, 92, 49-54 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Fadok, JP; Darvas, M က .; Dickerson, TMK; Palmiter, Pavlovian ကွောကျရှံ့ခွငျးအခြေအနေများ RD Long-Term မှတ်ဉာဏ်အတွက်နျူကလိယ Accumbens နှင့် Basolateral Amygdala အတွက် Dopamine လိုအပ်သည်။ PLoS ONE 2010, 5, e12751 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ဆုလာဘ်တန်ဖိုးနှင့်အန္တရာယ်အဘို့အ Schultz, ဒဗလျူ Dopamine အချက်ပြမှုများ: အခြေခံပညာနှင့်မကြာသေးမီကဒေတာ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Funct ။ BBF 2010, 6, 24 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Wittmann, ဘီစီ; Bunzeck, N ကို .; Dolan, RJ; Düzel, အသစ်အဆန်းတပ်သားသစ်ဆုလာဘ်စနစ်နှင့် hippocampus ၏အီးရှိလာစာမျက်နှာမြှင့်တင်နေစဉ်။ NeuroImage 2007, 38, 194-202 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Salamone, JD; ကော်ရဲရား, အမ် Mesolimbic Dopamine ၏နက်နဲသောအရာလှုံ့ဆော် Functions များ။ အာရုံခံဆဲလျ 2012, 76, 470-485 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Wolchik, SA; Beggs, မ; Wincze, JP; Sakheim, DK; Barlow, DH; Mavissakalian, အမ်အမျိုးသားများတွင်နောက်ဆက်တွဲလိင်စိတ်နိုးထအပေါ်စိတ်ခံစားမှု arousal ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ 1980, 89, 595-598 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Andrzejewski, ME, McKee, BL, Baldwin, AE; ဘန်း, L ကို .; ဟာနန်ဒက်ဇ်, P. အော်ပရေတာသင်ယူမှုစဉ်အတွင်း corticostriatal ကွန်ရက်မှာ neuroplasticity ၏လက်တွေ့ဆက်စပ်မှု။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2013, 37, 2071-2080 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Hyman, အရှေ့တောင်စွဲ: သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏တစ်ဦးကရောဂါ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 2005, 162, 1414-1422 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Jensen, FE; Nutt, AE အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်: ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်လူငယ်လူကြီးများမှတစ်ဦးအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့ Survival လမ်းညွှန်; Harper ကို: နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်, 2015 ။ [Google Scholar]
Doremus-Fitzwater, TL; Varlinskaya, EI; မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်လှံ, LP သို့လှုံ့ဆျောမှုစနစ်များ: ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အခြားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားမှုအဘို့အဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဂယက်ရိုက်။ ဦးနှောက် Cogn ။ 2010, 72, 114-123 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Seigfried-Spellar, KC; ရော်ဂျာ, MK deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုအတိုင်းလိုက်နာပါသလား ကွန်ပျူတာတစ်လုံး။ Hum ။ ပြုမူနေ။ 2013, 29, 1997-2003 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Nestler, EJ ΔFosB: ဆုကြေးများအတွက်တစ်ဦးကမော်လီကျူးပြောင်းလဲမည်။ ဂျေမူးယစ်ဆေးအရက် Res ။ 2013။ [Google Scholar] [CrossRef]
အိုး, KK, Frohmader, KS; Vialou, V ကို .; Mouzon, E ကို .; Nestler, EJ; Lehman, MN; Coolen သည်နျူကလိယ accumbens အတွက် LM DeltaFosB လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်ဘို့အရေးကြီးသည်။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2010, 9, 831-840 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Frohmader, KS; Wiskerke, ဂျေ .; ပညာရှိ RA; Lehman, MN; Coolen, LM သမ်ဖက်တမင်းအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိန်းညှိအာရုံခံ၏ subpopulations အပေါ်ပြုမူ။ neuroscience 2010, 166, 771-784 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
အိုး, KK, Vialou, V ကို .; Nestler, EJ; Laviolette, SR; Lehman, MN; Coolen, LM သဘာဝနှင့်ဆေးဝါးဆုလာဘ်တစ်ခု Key ကိုအာမခံအဖြစ်ΔFosBနှင့်အတူဘုံဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောပလပ်စတစ်ယန္တရားများအပေါ်ဥပဒေ။ ဂျေ neuroscience ။ 2013, 33, 3434-3442 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Garavan, H ကို .; Pankiewicz, ဂျေ .; Bloom, တစ်ဦးက .; cho, JK; Sperry, L ကို .; Ross ကတီဂျေ; Salmeron, BJ; မြင့်တက်, R ကို .; ကယ်လီ, D ကို .; Stein, EA ၏ Cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာ: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် Neuroanatomical သတ်မှတ်ချက်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 2000, 157, 1789-1798 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Vezina, P ကို ​​.; Leyton, အမ်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားများတွင်တွေကိုနှင့်လှုံ့ဆော်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးအေးစက်။ Neuropharmacology 2009, 56, 160-168 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင်, TE; Berridge, KC စွဲ၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: တချို့ကလက်ရှိပြဿနာများကို။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ B က Biol ။ သိပ္ပံ။ 2008, 363, 3137-3146 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kraus, SW; Voon, V ကို .; Potenza, MN တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive သငျ့သလော စှဲမွဲမှု 2016။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ကာရိုး, JS; Padilla-Walker က, LM; နယ်လ်ဆင်, LJ; Olson, CD ကို; barry, CM; Madsen, လွန်မြောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထဲတွင် SD ကမျိုးဆက်ကို XXX ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလက်ခံနှင့်အသုံးပြုမှု။ ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ res ။ 2008, 23, 6-30 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Hald, GM က; Kuyper, L ကို .; အာဒံ, PCG; က de ကျေး, JBF ပွုလုပျခွငျးရှင်းပြပါကြည့်ရှုခြင်းပါသလား? လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဒတ်ခ်ျပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်လူငယ်လူကြီးများတစ်အကြီးစားနမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားအသင်းမှအကဲဖြတ်။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2013, 10, 2986-2995 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ဟီလ်တန်, DL "အမြင့်အလိုဆန္ဒ" သို့မဟုတ် "မျှသာ" တစ်ခုစွဲ? သံမဏိ et al မှတစ်ဦးကတုန့်ပြန်။ Socioaffective neuroscience ။ Psychol ။ 2014။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Mechelmans, DJ သမား; Irvine, M က .; BANCA, P ကို ​​.; ပေါ်တာ L ကို .; မစ်ချယ်, S ကို .; မှဲ့, တီဘီ, Lapa, TR; Harrison, NA; Potenza, MN; Voon, နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်အကဲဆတ်တွေကိုဦးတည်အာရုံစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု Enhanced V. ။ PLoS ONE 2014, 9, e105476 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Laier, C ကို .; Pawlikowski, M က .; Pekal, ဂျေ .; Schulte, F ကို .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ်ဘာစွဲ: အတွေ့အကြုံလိင်စိတ်နိုးထညစ်ညမ်းနှင့်မစစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်စောင့်ကြည့်သည့်အခါခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ 2013, 2, 100-107 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Snagowski, ဂျေ .; Wegmann, E ကို .; Pekal, ဂျေ .; Laier, C ကို .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, ဘာစွဲထဲမှာအမ် Implicit အသင်းအဖွဲ့များ: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူတစ် Implicit အစည်းအရုံးစမ်းသပ်ခြင်း၏ adapter ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2015, 49, 7-12 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Chatzittofis, တစ်ဦးက .; Arver, S ကို .; Öberg K ကို .; Hallberg, ဂျေ .; Nordstrom, P ကို ​​.; Jokinen, hypersexual ရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ဂျေ HPA ဝင်ရိုး dysregulation ။ Psychoneuroendocrinology 2015, 63, 247-253 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Phillips က, B, .; Hajela, R ကို .; တစ်ဦးရောဂါအဖြစ် JR, DLH လိင်စွဲ: အကဲဖြတ်ဘို့အထောက်အထား, Diagnosis နှင့်ဝေဖန်သူများမှတုံ့ပြန်မှု။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော 2015, 22, 167-192 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
မတ်ေတာ, T က .; Laier, C ကို .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M က .; Hatch က L ကို .; Hajela, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ R. အာရုံကြောသိပ္ပံ: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို။ ပြုမူနေ။ သိပ္ပံ။ 2015, 5, 388-433 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kraus, SW; Meshberg-Cohen ကို, S ကို .; Martino, S ကို .; Quinones, LJ; Potenza, Naltrexone နှင့်အတူ compulsive ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှု MN ကုသမှု: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 2015, 172, 1260-1261 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Klucken, T က .; Wehrum-Osinsky, S ကို .; Schweckendiek, ဂျေ .; Kruse, အို .; compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက် Stark, R. ALTER အစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်သွယ်မှု။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2016, 13, 627-636 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kühn, S ကို .; Gallinat, Hypersexuality ၏ဂျေ Neurobiological အခြေခံ။ Neurobiology အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းခုနှစ်တွင်; ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း: အမ်စတာဒမ်, အဆိုပါနယ်သာလန်, 2016 ။ [Google Scholar]
ကိုကေးလာ၊ ဂျေ။ ; ကာလာ ၊S ။ ; Jääskeläinen, M ။ ; Vahlberg, T ။ ; Taiminen, T. ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အင်တာနက်နှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်မှုများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအသုံးပြုမှု။ အီးယူအာရ်။ စိတ်ရောဂါကုသမှုဂျေ Assoc ။ အီးယူအာရ်။ စိတ်ရောဂါ။ 2010, 25, 236-241 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Meerkerk, G. အ-J ကို .; ဗန် Den Eijnden, RJJM; Garretsen, HFL compulsive ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း: ဒါဟာအားလုံးလိင်အကြောင်းကိုပဲ! Cyberpsychology ။ ပြုမူနေ။ သက်ရောက်မှုကအင်တာနက် Multimed ။ virtual ရီးရဲလ်။ ပြုမူနေ။ Soc ။ 2006, 9, 95-103 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
DSM-V ကိုများအတွက် block, JJ ကိစ္စများ: အင်တာနက်စွဲ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 2008, 165, 306-307 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ရှင်ဘုရင်က, DL; Delfabbro, DSM-5 များအတွက် PH ကိုကိစ္စများ: ဗီဒီယို-ဂိမ်းရောဂါ? Aust ။ NZJ စိတ်ရောဂါကုသမှု 2013, 47, 20-22 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Potenza, DSM-5 များ၏အခြေအနေတွင် MN က Non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2014, 39, 1-2 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Leyton, M က .; Vezina, P. Striatal အတက်အကျ: လူသားတွေအတွက်စှဲဖို့အားနည်းချက်အတွက်သူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2013, 37, 1999-2014 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Prause, N ကို .; သံမဏိ, VR; Staley, C ကို .; Sabatinelli, D ကို .; Proudfit "porn စွဲ" နဲ့ကိုက်ညီမှုပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာများ GH Modulation ။ Biol ။ Psychol ။ 2015, 109, 192-199 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Snagowski, ဂျေ .; Laier, C ကို .; Duka, T က .; ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းသင်ယူဘို့အမှတ်တံဆိပ်, အမ် Subject တဏှာပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူများ၏နမူနာထဲမှာဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်းပြီး။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော 2016။ [Google Scholar] [CrossRef]
Snagowski, ဂျေ .; ပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူ့ Analog နမူနာအနေဖြင့်ရလဒ်များ: အမှတ်တံဆိပ်, ဘာစွဲ၏အမ်ရောဂါလက္ခဏာများနှစ်ဦးစလုံးချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ တပ်ဦး။ Psychol ။ 2015, 6, 653 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Laier, C ကို .; Pawlikowski, M က .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမရေရာဒွိဟအောက်မှာနှောင့်ယှက်။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2014, 43, 473-482 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kühn, S ကို .; Gallinat, ဂျေဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု: porn အပေါ်ဦးနှောက်။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု 2014, 71, 827-834 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Volkow, ND; ဝမ်, G. အ-J ကို .; Telang, F ကို .; မုဆိုး, JS; Logan, ဂျေ .; Childress, အေ-R ကို .; ဂြနျေး, M က .; ma, Y ကို .; သူတို့ကိုကင်းတွေကိုနှင့်အတူဒွန်တွဲနေကြသည်မဟုတ်လျှင် Wong, striatum အတွက် C. Dopamine တိုးကင်းချိုးဖောက်တဏှာထုတ်ယူကြပါဘူး။ NeuroImage 2008, 39, 1266-1273 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Ostlund, SB, LeBlanc, KH; Kosheleff, AR; Wassum, KM; Maidment, NT Phasic mesolimbic dopamine အချက်ပြထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိတွေ့မှုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ပံ့ပိုးကူညီ encodes ။ Neuropsychopharmacol ။ off ။ Publ ။ နံနက်။ Coll ။ Neuropsychopharmacol ။ 2014, 39, 2441-2449 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Vanderschuren, LJMJ; ပီယပ်, RC အသိမြှမူးယစ်ဆေးစွဲမှုအတွက် process လုပ်တယ်။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံခုနှစ်တွင်; ကိုယ်ပိုင်, DW, Gottschalk, JKS, Eds .; Springer ဘာလင် Heidelberg: ဘာလင်, ဂျာမနီ, 2010; စစ။ 179-195 ။ [Google Scholar]
Nestler, EJ ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: DeltaFosB ၏အခန်းက္ပ။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ B က Biol ။ သိပ္ပံ။ 2008, 363, 3245-3255 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Schultz, dopamine အာရုံခံ၏ဒဗလျူခန့်မှန်းဆုလာဘ် signal ကို။ ဂျေ Neurophysiol ။ 1998, 80, 1-27 ။ [Google Scholar] [PubMed]
လူယာ, SM; Bern, GS, ဂူတစ် passive သင်ယူမှုလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် PR စနစ်ယာယီခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများလူ့ striatum ကိုသက်ဝင်။ အာရုံခံဆဲလျ 2003, 38, 339-346 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Bayer, HM; Glimcher, PW Midbrain dopamine အာရုံခံတဲ့အရေအတွက်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှား signal ကိုဝှက်။ အာရုံခံဆဲလျ 2005, 47, 129-141 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Sunsay, C ကို .; Rebec, GV Extinction နှင့် Pavlovian ကိုက်စဉ်အတွင်းနျူကလိယ Accumbens Core အတွက် Phasic Dopamine နေရင်မြန်အောင်၏ Reinstatement ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 2014, 128, 579-587 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ဟတ်, AS; Rutledge, RB; Glimcher, PW, Phillips က, အ Rat နျူကလိယ Accumbens အတွက် Pem Phasic Dopamine ဖြန့်ချိအချိုးကျနေတဲ့ဆုကြေးဘီဘာအိုမှားယွင်းနေသည် Term Encodes ။ ဂျေ neuroscience ။ 2014, 34, 698-704 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kühn, S ကို .; Gallinat, ဥပဒေရေးရာနှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ-တစ်ဦးက cue-reactivity ကိုဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအရေအတွက် Meta-analysis သည်ကိုဖြတ်ပြီးတဏှာ၏ဂျေအဖြစ်များသည့်ဇီဝဗေဒ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2011, 33, 1318-1326 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
စတိန်း, RZ; Volkow, စွဲလမ်းအတွက် prefrontal cortex ၏ ND အလုပ်မဖြစ်: Neuroimaging တွေ့ရှိချက်များနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 2011, 12, 652-669 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Chase, HW; Eickhoff, SB, Laird, AR; Hogarth, မူးယစ်ဆေး stimulus ထုတ်ယူခြင်းနှင့်တဏှာ၏အယ်လ်အဆိုပါဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအခြေခံ: တစ်ခုက Activation ဖြစ်နိုင်ခြေကိုခနျ့မှနျးတွင် Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 2011, 70, 785-793 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
DiFeliceantonio, AG က; Berridge, KC "ချင်" ကိုဘယ် cue? အလယ်ပိုင်း amygdala ၏ Opioid ဆွရည်မှန်းချက်-ခြေရာခံနိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံအားကောင်းနိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံခြင်းပြသသကဲ့သို့, ပိုမိုအားကောင်းရည်မှန်းချက်-ခြေရာခံခြင်းပြသစေသည်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 2012, 230, 399-408 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Littel, M က .; Euser, AS; Munafò, MR; Meta-analysis သည်: ပစ္စည်းဥစ္စာ-related တွေကိုတဖက်သတ်သိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ Franken, IHA Electrophysiological ညွှန်းကိန်း။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2012, 36, 1803-1816 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Laier, C ကို .; Pekal, ဂျေ .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏လိင်ကွဲအမျိုးသမီးသည်အသုံးပြုသူများအတွက်အမ်ဘာစွဲဆန္ဒပြည့်အယူအဆအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်။ Cyberpsychology ပြုမူနေ။ Soc ။ Netw ။ 2014, 17, 505-511 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Rosenberg က, H ကို .; Kraus, အက်စ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အတူညစ်ညမ်းအတွက် "အသည်းအသန်ပူးတွဲမှု" ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ညစ်ညမ်းဘို့တဏှာ၏ဆက်ဆံရေးမျိုး။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2014, 39, 1012-1017 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kenny, PJ; Voren, G .; ဂျွန်ဆင်, ညနေ Dopamine D2 receptors နှင့်စွဲလမ်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက် striatopallidal ဂီယာ။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ 2013, 23, 535-538 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Baik, J.-H. ဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေအတွက်အချက်ပြ Dopamine ။ တပ်ဦး။ အာရုံကြော Circuits 2013, 7, 152 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
သံမဏိ, Ke; Prokopowicz, မိသားစုဆရာဝန်; Schweitzer, MA; Magunsuon, TH; Lidor, AO; Kuwabawa, H ကို .; Kumar က, တစ်ဦးက .; Brasic, ဂျေ .; Wong ကအလယ်ပိုင်း dopamine receptors ၏ DF ALTER မီနှင့်အစာအိမ်ရှောင်ကွင်းခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်။ အဝလွန်ခြင်း။ တစ်ဟုန်ထိုး။ 2010, 20, 369-374 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ပညာရှိ RA Dopamine နှင့်ဆုကြေး: ရက်နေ့တွင်အဆိုပါ Anhedonia Hypothesis 30 နှစ်ပေါင်း။ Neurotox ။ res ။ 2008, 14, 169-183 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Olsen, CM သဘာဝဆုလာဘ်, neuroplasticity နှင့် Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု။ Neuropharmacology 2011, 61, 1109-1122 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Stice, E ကို .; Yokum, S ကို .; Blum K ကို .; Bohon, C. အလေးချိန် Gain အာခေါင်စားနပ်ရိက္ခာမှလျှော့ Striatal တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2010, 30, 13105-13109 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kim က, SH; Baik, အက်စ်-H ကို .; ပန်းခြံ, CS; Kim က, SJ; Choi, SW; Kim က, အရှေ့တောင်အင်တာနက်စွဲနှင့်အတူလူ striatal dopamine D2 receptors လျှော့ချ။ Neuroreport 2011, 22, 407-411 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Hou, H ကို .; Jia, S ကို .; ဟူ, S ကို .; ပန်ကာ, R ကို .; နေရောင်, W .; နေရောင်, T က .; Zhang က, အိပ်ချ်အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူပြည်သူ့အတွက် Striatal Dopamine ပို့ဆောင်ရေးလျှော့ချ။ BioMed ။ res ။ int ။ 2012, 2012, e854524 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Tian, ​​M က .; Chen ကမေး .; Zhang က, Y ကို .; du, F ကို .; Hou, H ကို .; Chao, F ကို .; Zhang က, အိပ်ချ်ပေပုံရိပ်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါအတွက်ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြသည်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Nucl ။ Med ။ Mol ။ imaging 2014, 41, 1388-1397 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Mouras, H ကို .; Stoléru, S ကို .; Moulier, V ကို .; Pélégrini-Issac, M က .; Rouxel, R ကို .; Grandjean, B, .; Glutron, D ကို .; တစ်ခုက fMRI လေ့လာမှု: Bittoun, ခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများအားဖြင့်မှန်-အာရုံခံဆဲလျစနစ်၏ဂျေ Activation သွေးဆောင်စိုက်ထူ၏ဒီဂရီခန့်မှန်းထားပါတယ်။ NeuroImage 2008, 42, 1142-1150 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
နှစ်ဦးစလုံး, S ကို .; Spiering, M က .; Everaerd, W .; Laan, ဓာတ်ခွဲခန်း-သွေးဆောင်လိင်စိတ်နိုးထအောက်ပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်တုန့်ပြန်။ ဂျေလိင် Res ။ 2004, 41, 242-258 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Zillmann, D ကို .; ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ဦးစားပေးရွှေ့ပြောင်း Bryant, ဂျေ။ Community ။ res ။ 1986, 13, 560-578 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
လျူ, Y ကို .; Aragona, BJ; လူငယ်တို့, ka; Dietz, DM; Kabbaj, M က .; Mazei-Robison, M က .; Nestler, EJ; ဝမ်, Z. နျူကလိယ dopamine တစ် monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးစဘွန်း၏စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ချို့ယွင်း mediates accumbens ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 2010, 107, 1217-1222 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
သီချင်း, H ကို .; Zou, Z ကို .; Kou, ဂျေ .; လျူ, Y ကို .; ယန်, L ကို .; Zilverstand, တစ်ဦးက .; d'Oleire Uquillas, F ကို .; ဦးနှောက်ထဲမှာ Zhang က, X တို့မှာမတ်ေတာသ-related အပြောင်းအလဲများကို: တစ်ဦးကငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ တပ်ဦး။ Hum ။ neuroscience ။ 2015, 9, 71 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Villablanca, JR အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဦး caudate နျူကလိယရှိသနည်း Acta Neurobiol ။ Exp ။ 2010, 70, 95-105 ။ [Google Scholar]
ကူးတို့, CF; Snowdon, မှန် CT; ရှင်ဘုရင်က, ဂျေ, လီဗန်, JM; Ziegler, TE; Olson, DP; Schultz-မိုက်, NJ; Tannenbaum, PL; Ludwig, R ကို .; ဝူ, Z ကို .; et al ။ non-လူ့မျောက်ဝံများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အတူဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Pathways Associated ၏ activation ။ ဂျေ Magn ။ ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု။ JMRI Imaging 2004, 19, 168-175 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kraus, SW; Voon, V ကို .; Potenza, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ MN Neurobiology: လွန်မြောက်သိပ္ပံ။ Neuropsychopharmacology 2016, 41, 385-386 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Gola, M. ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအတွက်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များအတွက် LPP လျှော့ချခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုပုံစံများနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည် အားလုံးမော်ဒယ်ပေါ်မူတည်သည်။ (Prause, Steele, Staley, Sabatinelli, & Hajcak, 2015) အပေါ်မှတ်ချက်။ ဇီဝကမ္မ။ စိတ်ရောဂါ။ 2016။ [Google Scholar] [CrossRef]
Feil, ဂျေ .; Sheppard, D ကို .; Fitzgerald, PB; Yücel, M က .; Lubman, ကပစ; Bradshaw, JL စွဲ, compulsive မူးယစ်ဆေးရှာနှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုထိန်းညှိအတွက် frontostriatal ယန္တရားများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2010, 35, 248-275 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ဘီးလင်း, D ကို .; ကိုကင်းစွဲဖို့အသစ်အဆန်းများနှင့်အားနည်းချက်မှ Deroche-Gamonet, V. တုံ့ပြန်ချက်: multi-လက်ခဏာတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ။ အေးနွေ Harb ။ ရှုထောင့်။ Med ။ 2012။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Hayden, BY; Heilbronner, SR; Pearson, JM; Platt, ML အံ့အားသင့်စရာ anterior cingulate cortex အတွက်အချက်ပြမှုများ: အပြုအမူအတွက်ညှိနှိုင်းမှုကားမောင်းလက်မှတ်မထိုးဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများ၏အာရုံခံ encoding က။ ဂျေ neuroscience ။ off ။ ဂျေ Soc ။ neuroscience ။ 2011, 31, 4178-4187 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Segraves, RT ကို; Bari က M ကို .; Segraves K ကို .; Spirnak, psychogenic ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် penile tumescence အပေါ် apomorphine ၏ P. Effect ။ ဂျေ Urol ။ 1991, 145, 1174-1175 ။ [Google Scholar] [PubMed]
Montorsi, F ကို .; Perani, D ကို .; Anchisi, D ကို .; Salonia, တစ်ဦးက .; Scifo, P ကို ​​.; Rigiroli, P ကို ​​.; Deho, F ကို .; de Vito, ML; Heaton, ဂျေ .; Rigatti, P ကို ​​.; et al ။ apomorphine များ၏အုပ်ချုပ်ရေးကိုအောက်ပါဗီဒီယိုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနေစဉ်အတွင်းဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများ: ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှုရလဒ်များ။ အီးယူအာရ်။ Urol ။ 2003, 43, 405-411 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Cera, N ကို .; Delli Pizzi, S ကို .; di Pierro, ED; Gambi, F ကို .; Tartaro, တစ်ဦးက .; Vicentini, C ကို .; Paradiso Galatioto, G .; Romani, GL; Ferretti, Psychogenic Erectile အလုပ်မဖြစ်အတွက် Subcortical gray matter ၏အေ Macrostructural ALTER ။ PLoS ONE 2012, 7, e39118 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
ဝမ်, T က .; လျူ, B, .; ဝူ, Z. -J ကို .; ယန်, B, .; လျူ, ဂျေ-H ကို .; ဝမ်, ဂျေ-K သည် .; ဝမ်, အက်စ်-G .; ယန်, ဒဗလျူ-M .; သင်တို့က, Z.-Q. [Hypothalamus psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါ] ။ Zhonghua နန် Ke Xue Natl ။ ဂျေ Androl ။ 2008, 14, 602-605 ။ [Google Scholar]
Triana-Del ရီယို, R ကို .; Montero-Domínguez, F ကို .; Cibrian-Llanderal, T က .; Tecamachaltzi-Silvaran, ကို MB; Garcia က, LI; Manzo, ဂျေ .; ဟာနန်ဒက်ဇ်, ME, Coria-Avila, quinpirole ၏သက်ရောက်မှုအောက်တွင် GA လိင်တူခြင်းတွဲပြီးယောက်ျားအတွက်, ဒါပေမယ့်မရအမျိုးသမီးကြွက်တစ်အေးစက်လူမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော် preference ကိုဖြစ်ပေါ်သည်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 2011, 99, 604-613 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Triana-Del ရီယို, R ကို .; Tecamachaltzi-Silvarán, ကို MB; Díaz-Estrada, VX; Herrera-Covarrubias, D ကို .; Corona-Morales, AA ကို; Pfaus, JG; လိင် dimorphic ဦးနှောက်အရေးပါအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု: အထီးကြွက်များတွင် Coria-Avila, ဂျော်ဂျီယာအေးစက်လိင်တူချင်းမိတ်ဖက် preference ကို oxytocin နှင့် dopamine အားဖြင့် facilitated ဖြစ်ပါတယ်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 2015, 283, 69-77 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Politis, M က .; ချေးငွေများ, C ကို .; ဝူ K ကို .; O'Sullivan, အက်စ်အက်စ်, Woodhead, Z ကို .; Kiferle, L ကို .; လောရင့်, အေဒီ; Lees, AJ; Piccini, ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine ကုသမှု-နှင့်ဆက်စပ် hypersexuality အတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှ P. ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောတုံ့ပြန်မှု။ ဦးနှောက်ဂျေ Neurol ။ 2013, 136, 400-411 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
brom, M က .; နှစ်ဦးစလုံး, S ကို .; Laan, E ကို .; Everaerd, W .; Spinhoven, P. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အေးစက်, သင်ယူမှုနှင့် dopamine များ၏အခန်းကဏ္ဍ: တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုတစ်ဦးကဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2014, 38, 38-59 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Klucken, T က .; Schweckendiek, ဂျေ .; Merz, CJ; Tabbert K ကို .; Walter, B, .; Kagerer, S ကို .; Vaitl, D ကို .; conditional လိင်စိတ်နိုးထများ၏ဝယ်ယူ၏ Stark, R. ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ဆောင်ချက်: အရေးပေါ်အသိအမြင်နှင့်လိင်သက်ရောက်မှု။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2009, 6, 3071-3085 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Griffee K ကို .; O'Keefe, SL; မုတ်ဆိတ်, KW; လူငယ်တို့, DH; Kommor, MJ; Linz, TD; Swindell, S ကို .; Stroebel, အက်စ်အက်စ်လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဝေဖန်ကာလသင်ယူဖို့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်: လိင်စွဲလမ်းများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးနှင့်ကလေးမွေးမြူ။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော 2014, 21, 114-169 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Hoffman ဟာ, H ကို .; Janssen, E ကို .; Turner, အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ၏ SL, Classical အေးစက်: ကွဲပြားအသိအမြင်နှင့်အေးစက်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ဇီဝဆက်စပ်မှုသက်ရောက်မှု။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2004, 33, 43-53 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Plaud, JJ; Martini, JR အထီးလိင်စိတ်နိုးထ၏တုံ့ပြန်အေးစက်။ ပြုမူနေ။ ပြုပြင်မွမ်းမံ။ 1999, 23, 254-268 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Kippin, TE; ကာဣန SW; Pfaus, လိင် JG Estrous အနံ့နှင့်ကြားနေအနံ့ယောက်ျားကြွက်များတွင်သီးခြားအာရုံကြောလမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်အေးစက်။ neuroscience 2003, 117, 971-979 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Pfaus, JG; Kippin, TE; Centeno, အက်စ်အခြေအနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ Horm ။ ပြုမူနေ။ 2001, 40, 291-321 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Pfaus, JG; နိုင်ကြောင်း, ka; Talianakis, ယောက်ျားကြွက်များတွင်လိင်စိတ်နိုးထနှင့် copulatory အပြုအမူ၏အက်စ် Somatosensory အေးစက်: fetish ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးကမော်ဒယ်။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 2013, 122, 1-7 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Træen, B, .; Noor, SW; Hald, GM က; Rosser, BRS; Brady, အက်စ်အက်စ်, နိုင်ကြောင်း, D ကို .; Galos, DL; မီးခိုးရောင်ဂျေ; Horvath, KJ; Iantaffi, တစ်ဦးက .; et al ။ နော်ဝေမှာရှိတဲ့လိင်တူဆက်ဆံသောလူတို့၏နမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ၏အသုံးပြုမှုကိုအကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ပါ။ Scand ။ ဂျေ Psychol ။ 2015, 56, 290-296 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
နယ်လ်ဆင်, KM; Pantalone, DW; Gamarel, Ke; Simoni, အမျိုးသားများနှင့်အတူလိင်ဖူးသူကားအဘယ်သူအမျိုးသားများ၏လိင်အမူအကျင့်အပေါ်လိင်အကဲဆတ်သောအွန်လိုင်းမီဒီယာများ၏ခံစားသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ JM တစ်ဦးကနယူးတိုင်း။ ဂျေလိင် Res ။ 2015, 1-13 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Hoffman ဟာ, H ကို .; Goodrich, D ကို .; Wilson က M ကို .; Janssen, အီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အတွက်နျ Classical ကိုက်၏အခန်းက္ပ: တစ်ဦးကရှေ့ပြေးလေ့လာပါ။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော 2014, 21, 75-91 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
Pfaus, JG; Kippin, TE; Coria-Avila, ဂျော်ဂျီယာ, Gelez, H ကို .; Afonso, VM က; အစ္စမေးလ်, N ကို .; Parada, အမ်ဘယ်သူဘာဘယ်မှာအခါ (နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်အဘယ်ကြောင့်)? ဘယ်လိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏အတွေ့အကြုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, preference ကိုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဆက်သွယ်။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2012, 41, 31-62 ။ [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]